Awood-badbaadinta Microstation-ka, ayaa joojiya - Geofumadas
Si dhaqso ah u keydso Microstation, ka dhig
Markaan cusubi isticmaalno Microstation, caadi ahaan waxaan sameynaa qaladaad khatar ah maxaa yeelay Autosave (autosave) waa firfircooni. Guud ahaan AutoCAD looma isticmaalo, inkastoo ay jirto sababtoo ah waxay saamaysaa waxqabadka mashiinka.
Waxaan xasuustaa markii aan markii hore la kulmay Microstation, waxaan furay khariidadda kontoroolka waxayna bilaabeen inaan la ciyaaro macluumaadka isku dayaya in ay fahmaan sida isku midka ah ee AutoCAD. Ka dib, waxaan isku dayay buug la mid ah oo la mid ah kan keenay J version, amarrada amarrada, bakhtiinta, nuqulka, guuritaanka, isbeddelka, qarxa, dabiiciga ...
Wax yar ayaa ka niyadjabay in ay fududahay in AutoCAD ay u muuqatay mid dhexdhexaad ah Microstation, waxaan xidhay Microstation. Ups!
Markii aan dib u furay wax kastoo burburay ... Waxaan si nadiif ah u noqday waali iyo afar maalmood ka dib waxaan xasuustaa in maamulaha wasaaraddu inoogu soo waceen oo dhan waxaan dooneynay inaan dilno qofkii dhaawacay burburka ... hehe, dhilleysi dhilleysi ah.
Sannado ka dib, kulaylka cappuccino wanaagsan waxaan u sheegay in aan joogi jiray iyo qosolka dhadhamiyey wax la mid ah qaxwaha ... sida Gabriel García Márquez oo sheegay, daahir.
Microstation wuxuu keenaa ikhtiyaarka auto-save by default, oo guud ahaan ma naaqusin iyada, maxaa yeelay ma saameyn xawaaraha mashiinka iyo inaga naga badbaadiyo waqtiga ka shaqeynaya RAM oo riix badhanka badbaadinta.
Si aad u joojiso badbaadinta baabuurta, waa inaad tagtaa "goob shaqo / doorbid / hawlgal"halkan waxaan joojinnaa ikhtiyaarka"Si dhakhso ah u keydso Isbeddelka Naqshadaha"
Post Previous«Previous Noocyo badan oo loogu talagalay AutoCAD
Post Next Geofumadas oo ku saabsan duulimaadkii March 2008Next »